Tsy nanaiky nanao fifanarahana tamin’ireo milaza fa tompon’ny tany ny fokonolona, ka norahonany avy hatrany ary nilaza ilay tompon’ny tany fa amin’ity herinandro ity dia hitondra didy fandravana trano avy any amin’ny tribonaly izy. Raha ny nambaran’ireo fokonolona dia nampanantsoin’ilay “gérant” milaza fa tompon’ny tany izy ireo, ny zoma lasa teo, ary nilaza io olona io fa nasainy nitady trano ireo fokonolona ka izy no hiantoka ny hofan-trano mandritry ny 4 volana, izy koa no miantoka ny fiara hitaomana entana ary omena vatsin-dalana koa ny fokonolona. Tsy vitan’izay fa mbola notakian’io “gérant” io antontan-taratasy momba ny tany koa ireo mponina ary nilaza ireto farany fa efa lasa any amin’ny “domaine” sy ny tribonaly ny dosie rehetra mikasika ny tany. Rehefa tsy nanaiky fifanarahana anefa ireto mponina dia nahazo fandrahonana. Tsy nasian’io olona milaza fa tompon’ny tany io hasina koa ny fanajarian’izy ireo ny tany an-tanaony maro. Tsy hanaiky ary tsy hiala amin’ny taniny ireto mponina, raha ny nambaran’izy ireo ary tany mbola miady any amin’ny tribonaly izy io, izao mbola iadivana izao, hoy hatrany ny fanazavana. Marihina, hoy ny mponina fa mahitahita lalana io olona io ary manam-bola ary tonga dia hitondra ny didy fandravana avy any izy, hoy ireo mponina.